Isithangami sendlale okuhle nokubi ngempi yeRussia ne-Ukraine. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
IMPI ephakathi kweRussia ne-Ukraine izowuthikameza umnotho weNingizimu Afrika kodwa akhona namathuba angase aqhamuke angenza uhlomule.
Usho kanje uDkt uDavid Masondo, iPhini likaNgqongqoshe wezeziMali kuleli sonto.
UMasondo ubesethimbeni ebelinaba ngeSabelomali sikazwelonke kanjalo nesaKwaZulu-Natali. Ubebambisene noNgqongqoshe wezeziMali esifundazweni uNkk uNomusa Dube-Ncube, osomabhizinisi nezifundiswa.
“Ukutholakala kukawoyela kuzophazamiseka. Uma into ingasatholakali kalula kodwa bebaningi abayifunayo siyazi kwenzakalani. Kumanje ilitha likaphethroli liwuR21 nokuphazamisa amandla emali. Lolu thuthuva lubukeka luzophazamisa ukukhula komnotho womhlaba kodwa-ke siyiNingizimu Afrika ukuhwebelana kwethu neRussia kuncane njengoba kungaphansi kuka-1% kanjalo nokuhwebelana kwethu ne-Ukraine kungaphansi kuka-1%.
“Imvamisa uma kunalolu hlobo lwenkinga ukwehla kwamandla emali kuholela ekunyukeni kwemalimboleko, nokusho ukuthi abantu bangase bagweme ukutshala imali kulawo mazwe anjalo. Esikhathini esinjena abantu baye babone kuphephile ukutshala imali kwigolide, nokusho ukuthi kungenzeka sihlomule kanjalo,” kusho yena.
UMasondo wengeze ngokuthi abatshalimali bangabheka nezinye izinhlobo zokumbiwa phansi, nathe nakho kungavula amathuba njengokuthi mhlawumbe abantu bafune amalahle amaningi nathe kungasho ukuthi kuyaqhubeka ukungenisa imali eningi kwemboni yezokumbiwayo.
Nokuthi iNingizimu Afrika iyakhuluma selokhu kwafadalala umnotho ngenxa yokubheduka kweCOVID-19 yingenxa yamanani aphezulu okumbiwa phansi. Loku kusize uhulumeni angenise imali engaphezulu kwalena abeyibhekile njengoba eSabelwenimali sango-2022/23 kungene imali engaphezu kwalena ebilindelwe ngoR182 billion.
Sekuphele amasonto amathathu iRussia yaqala ukuhlasela i-Ukraine. Imibiko yabezindaba iveza ukuthi bangaphezu kuka-3 million abantu asebebalekile e-Ukraine, uhhafu waleso sibalo kuthiwa ngabantwana.
Izolo uNksz uChantal Marx, iNhloko ye-Investment Research eFNB Wealth and Investments, uthe enye yezinto ezinhle azibonayo ezingaqhamuka ngempi yeRussia ne-Ukraine wukuthi zizoshesha izinhlelo zokusebenzisa izindlela ezingayicekeli phansi imvelo.
“I-COVID-19 isifundisile ukuthi akulungile ukuthembela kakhulu ezimpahleni ezithengwa kwamanye amazwe njengoba besithembele kakhulu eChina. Manje loku (impi yeRussia ne-Ukraine) kusikhombisa ukuthi kuyingozi kangakanani ukuthembela kuwoyela kuze kweqe. Ngiyacabanga kumanje ohulumeni bayabhunga ngamanani kaphethroli azonyuka nokuthi loko kuzokwenzani emandleni emali,” kusho yena.
UNksz uMarx, iNhloko ye-Investment Research eFNB Wealth and Investments
UMasondo uqhubeke wanaba ngokuthi kungani uhulumeni elwa kangaka nokuqeda isikweletu lesi okumanje siwuR4 trillion. Uthi ukuboleka imali akuyona inkinga uma kwenzelwa ukukhulisa umnotho, nokungesona isizathu iNingizimu Afrika esibolekela imali.
“Thina imali siyibolekela ukutakula amabhizinisi kahulumeni. Kusukela ngo-2013 sesisebenzise uR290bn sitakula amabhizinisi kahulumeni. Loku kusho ukuthi sinciphise imali okufanele ngabe yenza okunye. Amabhizinisi kahulumeni awumthwalo esabelwenimali sezwe. Thina sibolekela ukuyidla imali, hhayi ukweseka izinhlelo zokukhulisa umnotho,” kukhala uMasondo.
Uthe nakuba kukuhle ukungena kwemali eningi ngenxa yezimayini kodwa uxwayisile ngokuthi akuyona into okungathenjelwa kuyona njalo lena njengoba ethe yinto yesikhashana. “Awukwazi ukuzibophezela ezintweni zesikhathi eside ngemali yesikhashana. Yingakho kufanele silethe izinguquko endleleni umnotho ophethwe ngayo ngoba yiyona kuphela indlela esizokhula ngayo. Uma ubheka amazwe akhulise umnotho wawo, iChina, iSouth Korea, i-England neMelika, kube nezinguquko ezinqala ezenzekile emnothweni wawo. Ngikhuluma ngamazwe aseneminyaka ngeminyaka ekhula… iChina seloku yaqala ukukhula ngo-1978 ngoba yashintsha umnotho.
“Thina sithembele embonini yokukhiqiza impahla kodwa kusukela ngo-1994 iyehla, uhulumeni uyazikhandla ukuvuselela imboni yokukhiqiza,” kusho uMasondo.
UNkk uDube-Ncube ukhale ngokuntuleka kwamakhono adingwa wumnotho wanxusa izikhungo zemfundo ephakeme ukuthi kubanjiswane ukulungisa le nselelo.
UDkt uBhasela Yalezo, ofundisa izifundo zamabhizinisi e-University of KwaZulu-Natal Graduate School of Business, uvumelane noNkk uDube-Ncube ngokuthi kumele kuguqulwe okufundiswayo. Nokho uphosele uhulumeni inselelo yokuthi kuyadingeka kwandiswe amanyuvesi njengoba ethe isabelo esinikwa izikhungo zemfundo ephakeme sehlile ngoba kugxilwe ekunyuseni isikhwama esixhasa abafundi iNSFAS.
Uthe kungakuhle nokuthi asetshenziswe amakhono ezifundiswa ukulekelela uhulumeni ngocwaningo.